दशरथ रङ्गशाला Info. About. What's This?
नेपालका खेलकुद मैदानहरू
ⓘ दशरथ रङ्गशाला
दशरथ रंगशाला नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला हो । दशरथ रंगशाला काठमाडौँको त्रिपुरेश्वरमा रहेको एउटा बहूदेश्य रंगशाला एउटा हो। यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो रंगशाला हो। यो अचेल यो धेरै जसो फुटबल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक र मनोरंजन कार्यक्रमहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। रंगशालामा ५,००० सीट छन र यसले २५,००० दर्शक थाम्न सक्छ। यसको निर्माण १९५६मा भएको हो। धेरै जसो नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू यस रंगशालामा आयोजना गर्ने गरीन्छ। प्रत्येक वर्ष यस मैदानमा शहीद स्मारक लीग प्रतियोगीताको पनि आयोजना गर्ने गरीन्छ। रातीको समयमा पनि प्रतियोगीता र कार्यक्रम आयोजना गर्न यो सक्षम होस् भनी यसमा फ्लडलाईट जडान गरीएको छ। काठमाण्डौमा आठौ दक्षिण एसियाई खेलकुद प्रतियोगीता आयोजना गरीएको थियो, त्यो प्रतियोगीता आयोजना हुनु पूर्व चीनको सहयोगमा यो रंगशाला पुन निर्माण गरीएको थियो। अचेल अनेकौ लिग प्रतियोगीताको लागि पनि यसको प्रयोग भै रहेको छ।
1.1. इतिहास पहिलो चरण
धेरैलाई अपत्यारिलो लाग्न सक्छ दशरथ रंगशालाको निमार्ण २०१३ सालमा तत्कालिन राजा महेन्द्रको राज्यभिषेक अगाडि सुरु भएको थियो। २०१३ सालभन्दा अगाडि हाल रंगशाला परिषरमा रहेको कभर्ड हलको खाली मैदानमा सार्वजनिकरूपमा फुटबल खेलिन्थ्यो। त्यो सानो टुँडीखेलको नामले परिचित थियो। अहिलेको फुटबल मैदान भएको ठाउमा त्यतिबेला ठूलो खाल्डो थियो रंगशालाको । त्यहाँ पोखरी पनि थियो।
२०१३ सालमा राजा महेन्द्रको राज्यभिषेकको अवसर पारेर कुस्ती एथ्लेटिक्स फुटबल व्याडमिन्टन र टेबल टेनिसको आयोजना गर्ने निर्णय भएपछि पहिलो पल्ट रंगशालाको आवश्यकता महसुस गरियो। अनि किरण शम्शेरलाई रंगशालाको निमार्णको जिम्मा दिइयो । उनले खाल्डो भएको स्थान सम्याउने कामलाई तिब्रता दिए। राता रात बुल्डोजर चलाईयो। यसका लागि २ महिनाको समय लागेको थियो। त्यतिबेला रंगशालाको पूर्व पट्टी सेनाको सानो ब्यारेक थियो। डाडो पनि। उत्तरतर्फ बाँसको ठूलो झयाङ। दक्षिणीतर्फको भाग खुल्ला थियो। पश्चिमतर्फ राजा राजपरिवारका सदस्य, मन्त्रिगण र अतिथीका लागि बस्न ३/४ वटा गाह्रो उठाइयो। त्यही स्थानमा एक तला घर पनि तयार पारियो। खेल साचालन नहुँदा आराम गर्न र शौचालय प्रयोगका लागि त्यो घर तयार पारीएको थियो।
हतारमा तयार पारीएकोले पहिलो रंगशालाको खेल मैदानको लेबल राम्रो थिएन। मैदानमा घाँस पनि थिएन। खाल्डोलाई माटोले सम्माएर मैदान तयार पारिएको थियो। प्रतियोगिताको दिन धुलो उड्ने डरले सधै पानी छर्किने गरिन्थ्यो। "खेल भइरहेको बेला धुलो उडेर विजोग भएको थियो" राज्यभिषेक कपमा एथ्लेटिक्सतर्फ भाग लिएका राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेप का पूर्व सदस्य-सचिव राजबहादुर सि‌ह पुरानो कुरा सम्झदैँ भन्छन्। उनका अनुसार यही प्रतियोगितामा पहिलो पल्ट फ्लड लाईटको प्रयोग भएको थियो। "बिजुली अफिसबाट लाईट झिकाएर बत्तिमा फुटबल म्याच खेलाईएको थियो" उनी भन्छन्। त्यतिबेला फुटबल ६० मिनेट खेलिएको थियो।
1.2. इतिहास दोस्रो चरण
रंगशालाको दोस्रो चरणको निमार्ण कार्य २०२२ सालमा सुरु गर्ने प्रयास भएको थियो। तर आर्थिक अभावका कारण सफल हुन सकेन। २०२२ सालमा नेपाल र चीन सरकारबीच रंगशाला निमार्णका लागि पहिलो पल्ट सम्झौता भएको थियो। त्यसका लागि चीन सरकारले सिमेन्टी र छड उपलब्ध गराएको थियो। प्याराफिट निमार्णका लागि उत्तर तर्फको माटो समेत काट्ने काम भएको थियो। तर रंगशाला निमार्णका लागि आवश्यक रकम जुटाउन नसक्दा बीचैमा काम अडकिन पुग्यो। त्यतिबेला राजदरबारले परिषद् सञ्चालनका लागि १० हजार रूपैया सहयोग पुर्‍याउदै याउदै आइरहेको थियो। यो रकम भारतको कोलकाताबाट सामान ढुवानी गर्न पनि अपुग थियो। चीन सरकारले आवश्यकता भन्दा बढि सिमेन्ट पढाएर सहयोग गर्न पनि खोजेको थियो। "पछि खर्च धान्न सकिएन र काम रद्द भयो" विद्या व्यायामका पूर्व फुटबल खेलाडी दीलेन्द्रविर पाण्डे भन्छन्। यतिबेला चिनिया सरकारले पठाएको केही बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेर पनि खर्च जोहो गर्ने प्रयास गरिएको थियो।
निमार्ण कार्य रोकिएपछि सुरक्षाको अभावमा थुप्रै छड र सिमेन्टका बोरा चोरी भएका थिए। "२ रूपैया बोराका सिमेन्ट बेचिएको थियो" परिषद्का पूर्व प्रशासन प्रमुख कमल प्रधान भन्छन्। त्यतिबेला परिषद्को सदस्य-सचिवमा सुशिल शम्शेर थिए। यसअघि उनकै सक्रियताको परिणाम २०२० सालमा राजा महेन्द्रले त्रिपुरेश्वरको २ सय रोपनी जग्गा हुकुम प्रमागीबाट रंगशालालाई प्रदान गरेका थिए। त्यस अघिसम्म रंगशाला बनेको जग्गा परिषद्को नाममा थिएन। यो जग्गाको लालपुर्जा २०३७ सालमा परिषद्ले मालपोत कार्यालयबाट निकालेको थियो त्यतिबेला जग्गा घटेर १ सय ३२ रोपनीमा सिमित भएको थियो। सुशिल शम्शेर कै सक्रियतामा २०२१ साल भदौ १३ गते परिषद्को पहिलो ऐन पनि जारि भएको थियो। यसै वर्ष भारतीय दूतावासले हाल नेपाल सेनाको मुख्यालय रहेको स्थानमा छड फलाम डण्डी टिन पाता र चेसिसको ठूलो मेलाको आयोजना गरेको थियो। मेला सकिएपछि दूतावासले यी सवै सामान परिषद्लाई हस्तान्तरण गरेको थियो। यही सामानहरूबाट त्रिपुरेश्वरस्थित कभर्ड हलको प्रारम्भिक निमार्ण कार्य सुरु भएको थियो।
यसको तीन वर्षपछि २०२४ सालमा राखेप बोर्ड पुर्नगठन भयो। कुमार खडग विक्रम शाह परिषद्को नया सदस्य-सचिव बने । अध्यक्ष भए बसुन्धरा विक्रम शाह। यीनिहरूले रंगशाला निमार्णको कामलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाए। जसका कारण २०२७ सालमा पूर्व र उत्तरतर्फ ५/५ लाईनको प्याराफिट तयार भयो। त्यसैक्रममा कभर्ड हलको पनि निमार्ण भयो र २०२८ सालमा उद्घाटन गरियो।
1.3. इतिहास आधुनिकिकरणको चरण
२०२८ साल माघ १७ गते राजा महेन्द्रको चितवनमा निधन भएको थियो, उनको निधनसंगै जेठा छोरा वीरेन्द्रलाई नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरियो । राजा वीरेन्द्रको राज्यभिषेक २०३१ सालमा हुने निर्णय भएपछि रंगशाला निमार्ण कार्यलाई झन जोडतोडका साथ सुरु गरियो । चीन सरकारसँग रंगशाला निमार्णका लागि पुनः सम्झौता भयो। छड र फलामका डन्डीहरू चीनबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाहको बाटो हुँदै नेपाल भित्रिने तय भयो । त्यतिबेला सामानको ुफवाडिङु रुक्लेरिङु एजेन्टको रूपमा ज्योती ब्रर्दशका ज्ञान ज्योतीलाई नियुक्त गरियो । लामो प्रयासपछि राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा आयोजना हुने खेलकुद प्रतियोगिताका लागि रंगशालाको पूर्व र उत्तरतर्फ १४/१४ स्टेपको प्याराफिट तयार भयो ।
पश्चिम तर्फ भिआइपीका लागि प्याराफिट बनाइयो । यस्तै एथ्लेटिक्सका लागि ६ लेनको ट्रयाकसमेत तयार पारियो । तर यो ट्रयाक इटाको धुलोले बनाइएको थियो । यसैक्रममा खेलाडीहरूको पूर्ण व्यवस्थाका लागि होस्टेल जहाँ अहिले अस्पताल राखिएको छ र स्वीमिङ पुल निमार्णका लागि २०३० सालमा शिलान्यास गरिएको थियो । होस्टेलको उद्घाटन २०३३ सालमा भएको थियो । तर त्यो विल्डिङ उद्घाटनदेखि हालसम्म होस्टेलको रूपमा प्रयोग भएको छैन । स्वीमिङ पुल भने २०३४ सालमा तयार भयो जसको उद्घाटन तत्कालिन राजा वीरेन्द्रले नै गरेका थिए ।
1.4. इतिहास अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने चरण
२०३४ सालमा शरदचन्द्र शाह राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्य-सचिव नियुक्त भएपछि रंगशालाको संरचनामा अझै सुधार आयो। रंगशालालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन २०३५ सालदेखि निमार्ण कार्य सुरु गरेर ०३७ सालमा पुरा गरियो। यतिबेला सरकारी रकम खर्च भएको थियो। त्यतिबेला बार्षिक रूपमा परिषद्को प्रशासनिक तर्फको खर्च ६ लाख रूपैया थियो भने विकाश बजेट २५ लाख रूपैया। रंगशालाको प्याराफिट भित्र अफिसका लागि कोठा निकाल्नेदेखि बाहिर सटर निमार्णको कामसमेत भएको थियो। प्याराफिटको माथिल्लो भाग थप गर्ने कामले पनि निरन्तरता पायो। यसैक्रममा भिआइपी प्याराफिटतर्फ लिफ्ट पनि जडान गरियो। रंगशाला निमार्णसंगै २०३८ सालमा दशरथ रंगशालामा पहिलो वृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरियो। यसको दुई वर्षपछि यही रंगशालामा दक्षिण एसियाको पहिलो दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता साफ सुरु भयो। २०४४ सालसम्म मैदान घेर्न पश्चिम दक्षिण र उत्तरतिरको प्याराफिट अगाडि नाङ्गो काडेँ तारले घेरिने गरिन्थ्यो। तर ४४ सालको दर्दनाक रंगशाला काण्डपछि काडेँ तारबाट मैदान घेर्न छोडियो। रंगशाला काण्डमा हावाहूरीका कारण भागाभाग गर्ने क्रममा ७१ जनाको निधन भएको थियो। यही घटनाका कारण तत्कालिन शिक्षा मन्त्रि केशरबहादुर विष्टले राजीनामा दिएका थिए।
1.5. इतिहास अहिलेको स्वरूप
दशरथ रंगशालाको हालको स्वरूप भने २०५५ सालमा तयार भएको हो। नेपालले आठौ साफ आयोजना गर्ने निर्णय भएलगत्तै चीन सरकारले आधुनिक रंगशाला निमार्णका लागि पुनः सहयोग गर् यो। आठौ साफ कै सन्दर्भमा रंगशालामा फर्ड लाईट र स्कोर बोर्ड थपियो। यस्तै दर्शकहरू सहजै मैदानमा झिर्न नपाउनु भन्ने उद्देश्यले प्याराफिटको तलको तीन लेन फुटाइयो। प्याराफिट रेलिङले घेर्ने काम पनि भयो। पानीबाट प्रभाव नपर्ने वाटर प्रुफ पेन्ट पुरै रंगशालामा लगाउनेलगायत पहिलो पल्ट ८ लेनको सेन्थेटिक ट्रयाकको पनि पुनः निमार्ण सम्पन्न गरियो।
2.1. रोचक किम्बदन्ति मसानघाट थियो पहिलेको रंगशाला
२०१३ सालमा दशरथ रंगशालाको पहिलो खाका तयार हुनु अघि यो ठाँउ मसानघाटको रूपमा परिचित थियो । वागमतीको पुलदेखि यो स्थान खुला मैदान थियो । काठमाडौँका पोडें र बागमती हालको बागमती पुल वरिपरिमा बस्ने जोगीहरूको लास जलाउने र गाड्ने गरिन्थ्यो वरिपरि । त्यसैले २०११ सालसम्म यो स्थान मसानघाट कै रूपमा चिनिन्थ्यो । यहाँका स्थानीयवासी दिउँसो १२ बजे र साझ ४ बजेदेखि रंगशाला वरिपरि नजान सवैलाई सल्लाह दिन्थे । रंगशालाको उत्तर प्याराफिट तर्फ पहिले ठूलो बासको झयाङ थियो । त्यो झयाङमा नाग भएको र त्यता नजान पनि सल्लाह दिन्थे । यस्तै हाल फुटबल मैदान भएको स्थान पहिले पोखरी थियो । यो पोखरी नजीकै नजान पनि सल्लाह दिन्थे । पोखरीमा तान्ने चिज छ भन्ने भनाई नै थियो त्यतिबेलाका स्थानीयवासीको । "त्यतिबेला हामी असनबाट त्रिपुरेश्वर जाँदा बासको झयाङबाट नजानु भन्ने गर्दथे," रानी पोखरी कर्नर टिम आरसिटी का पूर्व कप्तान पुरुषोत्तमप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन् ।
पहिले मसानघाट भएकै कारण रंगशालाको कभर्ड हल हाता र रंगशालाभित्र राती १२ बजे अनौठो हर्कत हुने गरेको दावी गर्छन यहाँका कर्मचारीहरू । त्यसैले २०४३ सालसम्म भन्ने गरिन्थ्यो, "रंगशाला र कभर्ड हलमा मध्यान्न १२ बजे एक्लै नछिर्नु। र राती यी ठाँउमा नजानु ।"
२०३९ सालमा खेलकुदका दुई वरिष्ठ कर्मचारी केशव गौतम र पार्थसारथी सेन गुप्ता मिठू गुरू सँग यस्तै अनौठो घटना भएको थियो । त्यतिबेला यी दुई कर्मचारीहरू भारतको पटियालाबाट प्रशिक्षक कोर्ष गरेर फर्किएका थिए। उनीहरू करिब २ महिना हाल परिषद्को प्रचार-प्रसार रहेको कोठामा बस्ने गर्दथे । त्यतिबेला त्यो कोठालाई खेलाडीको आराम गर्ने ठाँउको रूपमा विकसित गरिएको थियो । त्यतिबेलै परिषदमा कार्यरत थिए गार्ड हिरामान मर्हजन । यीनले यी दुवैलाई राती दिसाँ पिसाब गर्न स्वीमिङ पुल र कभर्ड हल क्षेत्र नजान सुझाव दिएका थिए। तर एक रात ११ बजे उनीहरू कभर्ड हल तर्फ पिसाब फेर्न जाँदा हाल दर्ता शाखा भएको कोठामा एकहोरो टाइपको आवाज आइरहेको थियो । त्यस्तै कभर्ड हलतिर टेबल टेनिस र व्याडमिन्टन खेलिरहेको आवाज गुञ्जिरहेको थियो । यो घटनापछि डरले यी दुवैले परिषद्को कोठा छोडेका थिए । "यो घटनापछि हामी परिषदमा सुत्नै छाड्यो । न्युरोडस्थित पिपलबोट नजीकै लज पाइन्थ्यो त्यही गएर बस्यौ" - घटनाका प्रत्यक्षदर्शी केशव गौतम भन्छन् ।
Wikipedia: दशरथ रङ्गशाला